Markaz Bilaal hambalyo iyo bogaadin u diray dhamaan Ardeydii Dhameysay Qu,aanka Kariimka
May 29, 2012 - Written by Aarhus:-Maamulka, Ducaada, macalimiinta waalidiinta, odayaasha, dhalinyarada, haweenka Markaz Bilaal waxay halkaan dhambaal hambalyo iyo bogaadin ah uga diraynaa dhamaan waalidiinta caruurtoodu dhameeyeen qu’aanka kariimka ah, sidoo kale waxaa dhambaalkaan la wadaaga Macalinkii caruurta iyo caruurtii dhamaysay qu’aanka kariimka, Dhaliyadarda qura’aanka dhameeyey oo kala ah.
1-C/Laahi Axmed Cabdi (Cambar)
2-Axmed Maxamed CAli
4-Xamdi Yusuf Xasan
5-Ruweyda Mustafe Jamac
6-Munira Cabdi Sahal maxamed
Maamulka iyo shacabka Markaz Bilaal waxay Allah ka baryayaan inuu xafido caruurtaas iyo dhamaan awlaada muslimiinta, waalidiinta caruurta dhashayna waxaan uga mahadcelinaynaa dadaalka habeen iyo maalin ah ee ay la garab taagnaayeen ubadkooda. waxaan sidoo kale u rajaynaynaa dhamaan caruurteena in illah u fududeeyo barashada quraanka iyo dhamaan culuumta islaamka.
Markaz bilaal wuxuu markasta dhiiri galinayaa horumarinta iyo barbaarinta wanaagsan ee ubadka soomaaliyeed ee magaaladan Århus, si loo gaaro himikooyinka la higsanayo waxaa lagama maarmaan ah in dhiirigaliyo midnimada jaaliyada lagana dhawro wax kasta oo kala fogaynaya.
Mar labaad waxaan bogaadinaynaa caruurteena gaaray guusha, guud ahaan waxaan caruurteena u rajaynaynaa guul adduun iyo aakhiraba ah.
Maamulka iyo shacabka Markaz Bilaal.